दोश्रो दिनको खेलमा शिब्स र लिटिल फ्लावरको जीत - News Today
दोश्रो दिनको खेलमा शिब्स र लिटिल फ्लावरको जीत
Date: ११ पुष २०७४, मंगलवार २०:२९
राजविराज, ११ पुस । महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखि क्याम्पसको मैदानमा सोमवारदेखि शुरु भएको रमपम अन्तर विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्र्तगतको मंगलवारको खेलमा शिव्स टिम विजयी भएको छ ।
लिटिल फलावरले म्याक्सेललाई ६ बिकेटले तथा शिब्सले दुर्गालाई ७ बिकेटले पराजित गरेको हो । दोश्रो दिनको पहिलो खेलमा शिब्सले टस जिती फिल्डिङ्ग गर्ने निर्णय गरेपछि ब्याटिङ्गको लागि ओर्लेको दुर्गा सेकेण्ड्रीले २० ओभरको खेलमा १७ ओभर ३ बलमा सम्पुर्ण बिकेट गुमाई ९५ रनको योगफल तयार पारेका थिए । दुर्गाका लागि प्रशान्त केशीले २३ तथा योगेश प्रमाणी र प्रशान्त राईले सामान ११ रनको योगदान दिएका थिए । बलिंग तर्फ शिब्सका अभय मण्डलले ३ बिकेट लिएका थिए भने बिवेक यादव, पुनित मण्डल र उमाशंकर यादवले सामान १ बिकेट लिएका थिए ।
९६ रनको लक्ष्य लिई मैदानमा ओर्लेको शिब्सले अमित यादवको बिस्फोट ३० बलमा ७ चौक्का र १ छक्काको मद्धतले नटआउट रही ५१ रन जोडे पछि ११ ओभर ३ बलमा ३ बिकेटकै नोक्सानीमा उक्त लक्ष्य भेटाएका थिए । अमित बाहेक निरज यादवले १२ रनको योगदान दिएका थिए । बलिंग तर्फ दुर्गाका प्रशान्त केसीले २ तथा आगमान थापाले १ बिकेट लिएका थिए । खेलको म्यान अफ द म्याच बिस्फोटक ब्याटिंग गरेका तथा भर्खरै सिंगापुरमा सम्पन्न १६ बर्ष मुनिका नेपाली टोलीका सदस्य अमित यादव घोषित भए । मंगलवार नै सम्पन्न अर्को खेलमा म्याक्सेलले टस जितेर पहिलो ब्याटिंग गर्ने निर्णय गर्दै निर्धारित १६ ओभरको खेलमा ८ बिकेटको नोक्सानीमा ९६ रनको योगफल तयार पारेका थिए । म्याक्सेलका लागि बिनित चौहानले ४१ र रोहन बिकले १२ रनको योगदान दिएका थिए भने बलिंग तर्फ लिटिल फलावरका तर्फबाट अभय थापा ३ तथा नविन मण्डल र मो. उमर फारुकले क्रमशः २ र १ बिकेट लिए ।
९७ रनको लक्ष्य लिई मैदानमा ओर्लेको लिटिल फलावरले १३ ओभर ५ बलमै ४ बिकेटको नोक्सानीमा उक्त लक्ष्य भेटाएका थिए । लिटिलका लागि आलोक सिंहले ३२ बलमा ७ चौक्काको मद्धतले अविजित ४६ रनको योगदान दिएका थिए भने मो. उमर फारुकले १६ तथा रबि सिंहले १२ रनको योगदान दिएका थिए । बलिंग तर्फ धिरेन्द्र यादव, रोहन बि.क र आनन्द मेहताले सामान १ बिकेट लिएक थिए । खेलको म्यान अफ द म्याच लिटिल फलावरका आलोक सिंह घोषित भएका थिए ।
युथ क्रिकेट एकेडेमी राजबिराजको आयोजनामा सञ्चालित उक्त प्रतियोगिता अन्र्तगत बुधवारको पहिलो खेल दुर्गा र शारदा बिच तथा दोश्रो खेल लिटिल फ्लावर र लालीगुराँस बिच हुने आयोजक समितिका अध्यक्ष बिरेन्द्र यादवले जानकारी दिएका छन् ।
Previous : प्रहरी संगठन नागरिकमैत्री भएर अगाडि बढेको छः एआइजी कायस्थ
Next : बाढी पीडित बालबालिकाहरुलाई क्रेसद्वारा आर्थिक सहयोग